बिकास गर्न सरकारको मुख ताक्नै पर्छ र ? • ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
बिकास गर्न सरकारको मुख ताक्नै पर्छ र ?
बुटवल, २७ माघ ।
स्थानीयबासीमा बिकास प्रतिको ईच्छा शक्तिमात्र हुने हो भने सरकारले गर्न नसकेको काम द्रुतगतिमा जनताले नै गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण रुपन्देहीमा देखाएकाछन् । बुटवल बेलहिया सडक खण्डको ६ लेनको सडक पुरा हुन सरकारलाई १२ बजिरहेका बेला, बनेको झण्डै ५ किलोमिटर सडक भने सरकारी उपस्थिती बिना नै जनताले हरियाली बनाईदिएकाछन् ।
बुटवल बेलहिया खण्डको सिक्सलेन सडक अन्तर्गत निर्माण पुराभएको योगीकुटि देखि मणीग्रामसम्म सडक खण्डको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा नगरका स्थानीयबासीले आफ्नै लगानीमा हरियाली बनाईदिएका छन् । सडकको दुबै किनारमा बिभिन्न प्रजातिका फुल, विरुवा रोपे पछि सडकखण्ड नेपालभित्रकै होईन कि भन्ने जस्तो देखिएको छ । स्थानीय ब्यवसायी सुरज काफ्ले र रमेश पाण्डेको सक्रियतामा घर अगाडी फुलरोप्ने कामको सुरुवात भएपछि स्थानीय सबैले उनीहरुलाई पछ्याउंदै ५ किलोमिटर क्षेत्र नै हरियाली बनाउने अभियानमा जुटेकाछन् ।
१ वर्ष अगाडी दुबईमा काम बिशेषले पुगेका सुरजलाई नेपालमा पनि यस्तै बनाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागेको थियो । नेपाल फर्के लगत्तै घर अगाडी बन्दै गरेको ६ लेन सडक सिंगार्ने रहर पुरा गर्दै उनले सडकको आईसलेण्ड क्षेत्रमा फुल रोप्न सुरु गरेका थिए । दुबईमा देखेको सपना नेपालमा पुरा भएको काफ्ले बताउंछन् ।
सुरजको योजनाको होस्टेमा हंसे गर्ने अभियन्ता थिए अर्का ब्यवसायी रमेश पाण्डे । नर्सरीको ब्यवसाय गर्ने रमेशसंग फुलवारीको बिज्ञता र सुरजसंगको ईच्छा मिलेपछि सुरजकै घर अगाडीबाट सुरुभयो सडक किनार हरियो बनाउने अभियान् । लुम्बिनी सम्म पुग्ने सडक किनारमा हरियाली र सडकको बिच भागमा बुद्धका बिभिन्न मुर्ति राखेको हेर्ने ईच्छा छ पाण्डेको ।
सुरजका घर अगाडी थरिथरिका फुल फुलेपछि उनका छिमेकीलाईपनि रहर पलायो घर अगाडी हरियो बनाउने । क्रमशः सुरुभयो तिलोत्तमा नगरका सडक किनार अभियानमा फुल रोप्ने अभियान । सडकको किनारमा फुल संगै अर्गानीक तरकारी पनि फल्न थालेपछि यतिबेला सबैमा उत्साह पलाएको छ । आमा समुहको नाममा होस् वा महिला समुहको नाममा तिलोत्तममाका जनता यतिबेला फुर्सद भयो कि सडक किनारको फुलवारी गोड्न वा फुल लगाउन जुटि हाल्छन् । सरकारी सहयोग बिना पनि उनीहरुमा कुनै उत्साहमा कमी छैन ।
जनताको यती धेरै लगानीमा स्थानीय सरकारको भने रत्तीभर लगानी छैन । ग्रिन तिलोत्तमा क्लीन तिलोत्तमाको नारा सहित सपथ खाएका तिलोत्तमा नगरपालीकाले नारा तय गर्नु बाहेक सडकको सुन्दरतामा लगानी गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाकै नारालाई जनताले साकार पारेपनि नगरपालिकाले लगानी गर्न नसकेको स्विकारोक्ति छ नगरपालिकाका उप प्रमुख जागेश्वरी चौधरीको ।
छिमेकी तिलोत्तमामा स्थानीयले धमाधम सडक किनारमा हरियाली बनाउन थालेपछि बुटवल उपमहानगरका जनतामा पनि जांगर पलाएको देखिएको छ । जसरी बिकासमा ईच्छाशक्ति भए सरकारको मुख ताक्नै पर्छ भन्ने केहि छैन भन्ने कुराको उहाहरण रुपन्देहीबाट सुरु भएको छ, त्यो उदाहरण घरभित्र थुप्रिएको फोहोर लाजै नमानी सडकमा फाल्ने बानी परेका अन्य नगरबासीहरुले सिक्न जरुरी छ ।